समाचार - दैनिक जीवनमा सामान्य मोड चोक खेल्ने भूमिका के हो?
दैनिक जीवनमा सामान्य मोड चोक खेल्ने भूमिका के हो?
आज हामी तपाईंलाई चुम्बकीय औंठीको सामान्य मोड ind indance को भूमिका देखाउन जाँदैछौं।
चुम्बकीय औंठी सामान्य मोड ind indance मुख्यतया निम्न तीन बिन्दुहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ:
१. चुम्बकीय औंठी सामान्य मोड इन्डक्टरहरू फ्रिज, वाशिंग मेशिन, क्यामेरा, सानो आकारको फ्लोरोसेंट बत्ती, टेप रेकर्डर, रंग टिभी, इत्यादिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। आम उत्पादनहरूका बीचमा, चुम्बकीय औंठी सामान्य मोड इन्डक्टर्सले मुख्यतया एसी लाइन सामान्य मोड चोक दमन गर्दछ। फ्लो लूपले हल्ला गर्छ। यसको साथमा, हामी यी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा संकेत अवरोध र हस्तक्षेपको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
२. AC ट्युनर, फ्याक्स, बिजुली आपूर्ति, इत्यादिमा प्रयोग गरिएको पहिलो बिन्दु जस्तै, सामान्य मोड इन्डक्टर मुख्यतया सामान्य मोड चोकको केही गडबड उत्पादनलाई दबाउन, र सly्केतमा सly्केत सही प्रसारण गर्न कार्य गर्दछ। टर्मिनल
Some. केही साना साझेदारहरूको इन्डक्टरको प्रेरणको लागि धेरै उच्च आवश्यकताहरू हुन्छन्। यस समयमा, यसलाई चुम्बकीय औंठी सामान्य मोड इन्डक्टर प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। उच्च चुम्बकीय पारगम्यता, कम तापमान जुन इन्डक्टरले सामना गर्न सक्दछ। एकै साथ हामी इन्डक्टर कुण्डलको विन्डिingsहरूको संख्या पनि कम गर्न सक्छौं र ठूलो व्यासको तामाको तार प्रयोग गर्न सक्छौं। तपाईंको आवश्यकता अनुसार सही कोर छनौट गर्नुहोस्।
एकै साथ, एक चुम्बकीय मोती इन्डक्टन्स सामग्रीको रूपमा, मोती र चुम्बकीय औंठी बढी भंगुर छन्। जब बाह्य मेकानिकल तनाव (प्रभाव, टक्कर) को अधीनमा हुँदा, चुम्बक शरीर क्र्याक्सको खतरामा पर्दछ, त्यसैले हामीले पीसीबीको प्रयोग गर्दा चुम्बकीय मोतीमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। जब बोर्ड लेआउट स्थापना हुन्छ, यो इनलाइन लाइन कनेक्टरको cm सेमी भित्र हुनु हुँदैन।
बिभिन्न आवश्यकताको लागि, बिभिन्न गुण इन्डक्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो हो जुन हामी सँधै प्रोत्साहन र सबैका लागि वकालत गर्दछौं। खैर, आजको चुम्बकीय औंठी सामान्य मोड ind indance सबैको लागि प्रस्तुत गरिएको छ। यदि तपाईं अधिक ind indance जानकारी जान्न चाहानुहुन्छ, अधिक ज्ञान सिक्नुहोस्, हामीलाई परामर्श को लागी एक सन्देश छोड्न स्वागत छ!
पोष्ट समय: जुन ०१-२०१२